बीमा कम्पनी - शिखर इन्स्योरेन्सको ‘शिखर’ यात्रा जारी, बीमा कोष र नाफामा अत्याधिक बृद्धि
सात ग्राम ब्राउनसुगरसहित एक पक्राउ | दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय खुला कराँते प्रतियोगिता हुने | विप्लव समूहका भेरी ब्यूरो सदस्य पक्राउ | ‘खाद्यान्न र स्वस्थ जीवनका लागि जैविक विविधता’ | मेस्सी सहितको अर्जेन्टिनी टिमको घोषणा
काठमाडौं । शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले नाम र काम बीचको तालमेल जारी राखेको छ । निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुको सुचीमा अग्रस्थानमा देखिएको याे कम्पनीले चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमाससम्ममा आइपुग्दा ३३ करोड ६२ लाख ४२ हजार रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको छ । याे गत वर्षको यसै अवधिको तुलनामा नाफा ८.४३ प्रतिशतले बढी हो । शिखरले गत वर्ष ३१ करोड १ लाख ६ हजार रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको थियो । कम्पनीले यस अवधिमा बीमा कोष २८.३५ प्रतिशतले बढाएर १ अर्ब १ करोड ९३ लाख १३ हजार रुपैयाँ पुर्याएको छ । गत वर्ष बीमा कोषमा ७९ करोड ४ लाख ३७ हजार रुपैयाँ थियो ।	थप पढ्नुहोस्
काठमाडौं । प्राइम लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीले चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासमा उल्लेख्य नाफा कमाएको छ । इन्सुरेन्सले २०७५ चैत मसान्तसम्म १६ करोड ३६ लाख ८१ हजार रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको हो । गत वर्षको यसै अवधिमा १४ करोड ३१ लाख ५८ हजार रुपैयाँ रहेको खुद नाफा गरेको सो इन्स्योरेन्सले अहिले १४.३४ प्रतिशतले बढाउन सफल भएको हो । यता, प्राइम लाइफको खुद बिमा शुल्क पनि २८.५३ प्रतिशतले ले बढेर १ अर्ब ८७ करोड ३ लाख ५६ हजार रुपैयाँ पुगेको छ । गत वर्ष खुद बीमा शुल्क १ अर्ब ४५ करोड ५१ लाख ४८ हजार रुपैयाँ थियो ।	थप पढ्नुहोस्
काठमाडौं । नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा बीमा कम्पनीमध्ये पहिलो साधारण सभा डाक्ने कम्पनी बनेको छ। इन्स्योरेन्सले आगामी जेठ ४ गते शनिबार बिहान ९ः३० बजे होटल दियालो वीरगञ्जमा १९ औं वार्षिक साधारण सभा बोलाएको छ । १९ औं वार्षिक साधारण सभा, बोनस तथा लाभांश प्रयोजनका लागि यहि बैशाख १९ गते शेयरधनी दर्ता पुस्तिका बन्द (बुकक्लोज) गर्ने भएको छ । यसअनुसार बुकक्लोजको अघिल्लो कारोबार दिन अर्थात बैशाख १७ गते मंगलबारसम्म कायम शेयरधनीले मात्र साधारण सभामा सहभागिता जनाउन पाउनुका साथै गत आर्थिक वर्षको लाभांश पाउनेछन् ।	थप पढ्नुहोस्
काठमाडौं । सानिमा लाईफ इन्स्योरेन्स र कैलाश बिकास बैंक बीच जीवन बीमा सेवा प्रवाह सम्वन्धि संझौता भएको छ। सम्झौतामा सानिमा लाईफ इन्स्योरेन्सको तर्फबाट महाप्रबन्धक शिवराम तिमिल्सिना तथा बैकका तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अमृतचरण श्रेष्ठले हस्ताक्षर गरेका छन् । उक्त कार्यक्रममा बैंकका तर्फबाट डेपुटी सीईओ तारा मानन्धर, इन्स्योरेन्स कम्पनीका तर्फबाट वरिष्ठ प्रबन्धक गुणराज श्रेष्ठ तथा वरिष्ठ अधिकृत आशिष अधिकारी समेतको उपस्थीति रहेको थियो ।	थप पढ्नुहोस्
काठमाडौं । सनराइज बैंक लिमिटेड र लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेशन (नेपाल) लि. बीच बैंकास्योरेन्स (Bancassurance) सम्बन्धि सम्झौता भएको छ । बैंकास्योरेन्स सम्झौता अनुसार सनराइज बैंकले देशभर रहेका १०३ वटै शाखाहरूबाट एल.आइ.सी, नेपालको जीवन बीमा योजनाहरू बिक्री गर्नसक्ने छ । सनराइज बैंक लिमिटेडको प्रधान कार्यालयमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रत्नराज बज्राचार्य र लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेशन (नेपाल) लि. का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत लक्ष्मीप्रसाद दास बीच बैंकास्योरेन्स सम्बन्धी सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो ।	थप पढ्नुहोस्
काठमाडौं । विगत १८ वर्षदेखि नेपालको जीवन बीमा क्षेत्रमा उत्कृष्ट सेवा तथा सुविधा प्रदान गरी आम जनमानसमा लोकप्रिय बनेको नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले पछिल्लो पटक विभिन्न घातक रोगहरू (क्रिटिकल इल्नेस) को जोखिम बहन गर्ने बीमा योजना सार्वजनिक गरेको छ । कम्पनीले आफ्ना उच्च अधिकारी र एजेण्टहरूको उपस्थितिमा एक कार्यक्रमका बीच रू. ५० लाखसम्मको जोखिम वहन हुने ‘घातक रोग सुविधा योजना’ नामक बीमा योजना सार्वजनिक गरेको हो ।	थप पढ्नुहोस्
काठमाडौं । नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्स बैंक. र अजोड इन्स्योरेन्सबीच बीमा सेवा प्रदान गर्ने सम्बन्धी सहकार्यात्मक सम्झौता भएको छ । सम्झौता अनुसार एनसीसी बैंकको बिभिन्न शाखा कार्यालयहरुबाट बैंकका ग्राहकहरूले अजोड इन्स्योरेन्स लिमिटेडले प्रदान गर्ने निर्जीवन बीमा सम्बन्धी सेवा सुविधाहरू प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।	थप पढ्नुहोस्
काठमाडौं । नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्स बैंक र शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी बीच बीमा सेवा प्रदान गर्ने सम्बन्धी सहकार्यात्मक सम्झौता भएको छ । सम्झौता अनुसार एनसीसी बैंकको कर्पोरेट तथा बिभिन्न शाखा कार्यालयहरुबाट बैंकका ग्राहकहरूले शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले प्रदान गर्ने निर्जीवन बीमा सम्बन्धी सेवा सुविधाहरू प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।	थप पढ्नुहोस्
काठमाडौं । मुक्तिनाथ विकास बैंक र लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड बीच बैंकासोरेन्स सम्झौता सम्पन्न भएको छ । उक्त सम्झौतामा मुक्तिनाथ विकास बैंकको तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रद्युमन पोखरेल र लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनीको तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नोरप्रकाश प्रधानले हस्ताक्षर गरेका छन् । उक्त सम्झौता भए पश्चात लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनीले जारी गर्ने विभिन्न निर्जीवन बीमा योजनाहरु मुक्तिनाथ विकास बैंकको देशभर रहेका शाखा कार्यालयहरुबाट उपलब्ध हुनेछ ।	थप पढ्नुहोस्
नेपाल लाईफ इन्स्योरेन्स र कामना सेवा विकास बैंकबीच सम्झौता
काठमाडौं । कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड र नेपाल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडबीच आज बैंकास्योरेन्स सम्बन्धी सम्झौता भएको छ ।सम्झौता अनुसार अब कामना सेवा विकास बैंकका ग्राहकहरुले मुलुकभर फैलिएको ६३ वटै शाखाहरुबाट सहज रुपमा नेपाल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको जीबन बीमा पोलिसीहरु खरिद गर्न सक्नेछन् । सम्झौतासँगै बैंकको व्यावसाय प्रवर्धनमा सहयोग पुग्नुका साथै ग्राहकहरु लावाविन्त हुने बैंकले जनाएको छ ।	थप पढ्नुहोस्
सात ग्राम ब्राउनसुगरसहित एक ...